MACNAHA IYO HABABKA LAGU DAGAALAMO DUULIMAADKA BASASHA - BOW
Riyadii degganaha xagaaga iyo beerta xannaaneeyuhu waa hodanno dhadhan fiican leh.
Oo sidee bay u dhibbanaan kartaa marka cayayaanka dalagyada beerta, khudaarta caleemaha iyo si yar u yareeya waxsoosaarkooda, waxay ku jiraan habka lagu gaari karo riyo.
Badanaa waa inaad wakhti badan ku qaadataa oo aad ku dadaashaa inaad ka tirtirto cayayaanka dhibsado ee goobtaada, iyada oo la adeegsanayo habab kala duwan.
Si kastaba ha ahaatee, in this article, waxaan ka hadli doonaa sida loo ciribtiro of duulis ah basasha si fiican, tan, inta badan, waa cayayaankan kaas oo laga helay sariiraha leh basasha.
Ma taqaanaa? Basasha geedaha waxay isla markiiba weerari karaan in ka badan 10 cayayaanka kuwaas oo ku quudiya caleemaha, jirridda, xididdada, xididdada, miraha dhirta, taas oo keeni karta waxyeello weyn oo soo gaarta soo saarka iyo samaynta ciidda aan ku habooneyn beerashada dalagyada la xiriira saddexda illaa afar xilli.
Sifeynta sharoobka basasha
Si loo ogaado cidda la dagaallameysa, waxaa lagama maarmaan ah in la yeesho fikrad ah waxa duulimaadku u eg yahay. Dhab ahaantii, waxay aad ugu egtahay guri caadi ah: jidhkeedu waa mid caan ah ama midab huruud ah oo gaaraya 5-7 mm, baalasheeda waa mid hufan. Duulimka laftiisu ma khatar galin karo dhirta, laakiin dirxiga ayaa sababa waxyeelo weyn.
Qiyaastii bartamihii bishii May, duulladu waxay qaadataa ka dib jiilaalka si ay ukumo ukumo iyo sii wadaan tartanka. Waqtiga ay baxayaan waxay ku beegantahay ubaxyada jeeriga, lilacs, løndag. Isla muddadaas, cuntada cayayaanka waa cayayaanka dhirta ubaxa. Duufaanku waxay billaabmaysaa in la dhigo ukumaha bilowga xagaaga, iyaga oo ku dhex jira ciidda iyo caleemaha basasha.
Toddobaad ka dib, dirxiga cad ee bilaa macaan wuxuu u muuqdaa ilaa 10 mm, kaas oo billaabanaya inuu si firfircoon u quudiyo. Waxay cunaan qiyaasta basasha dhowr wiig ah, waxay giigsanayaan gudaha guluubka gudaha, ka dibna u tag dhulka si aad u dhalatay. Ka dib 14-18 maalmood, maqaarka cusub ee cagaarka ayaa u muuqda. Xilliga xagaaga waxaa jira isbeddel laba ama saddex jir ah. Jiilaalka ee pupae wuxuu ku dhacaa ciidda, qoto dheer 5-20 cm.
Sidaa darteed, jiilka kowaad wuxuu waxyeello u geystaa qaansada Juun, iyo kan labaadna wuxuu bilaabmaa waxqabadka waxyeellada ah ee bilaha Luulyo iyo Agoosto.
Maxaa waxyeelo ka soo duubay basasha
Calaamadaha ugu horreeya ee dirxiga duudduubka ah waa huruud iyo qalajinta baalasha ee basasha, taas oo ka dhalatay taas oo uu geedka bilaabmayo ka dambeeya koritaanka iyo nalalka kallana, taas oo bilaaba in ay soo saaraan ur xun.
Cayayaanka ayaa weerara dhammaan noocyada basasha, toonta, ubaxyada ubaxa, noocyada salad.
Tallaabooyinka ka hortagga duqsiyada basasha
Tallaabooyinka ugu muhiimsan ee lagula dagaallamayo cayayaanku waxay noqon doonaan tallaabooyin ka hortag ah oo xaddidaya xaaladaha wanaagsan ee loogu talagalay khatarta ah dulmiga. Waxay noqon karaan fure u ah ilaalinta beergooyska waxayna u adeegi doonaan hab kale oo wanaagsan oo loo isticmaalo isticmaalka daroogooyinka waxyeello u leh caafimaadka bini'aadamka.
Ka ilaalinta duqsiga basasha waa:
daaweynta wax soo saarka ka hor beerashada;
isbeddel sax ah dhaqanka;
Beerta ku dhow dhirta dhirta, duudduubka basasha;
dayrta qashin carrada.
Isticmaalka dhaqannada beeraha ee dagaalka lagaga soo horjeedo cayayaannada cayayaanka
Marka hore, waa in ay ahaataa hab masuuliyad u leh doorashada xulashada beeraha. Waa in lagu iibsado dukaamo khaas ah, maxaa yeelay waxaad heli doontaa fursado badan oo aad ku hesho nalalka tayo sare leh.
Haddii aad wali isku daydo inaad isticmaasho alaabta la isku shaandheyn karo, ka hor intaanad dhulka dhulka ku dhicin, Basasha waa in lagu daaweeyaa biyo kulul (si toos ah ayaad u samayn kartaa intaad beerto). Nalalka waxaa la dhigaa biyo kulul ilaa heerkul ah + 45 ... +46 º, waxaa lagu hayaa 10-15 daqiiqadood, iyo heerkul + 50 ... +52 ºS -3-5 daqiiqo. Ka dib markaa way qalalan yihiin.
Sidoo kale basasha waa ka hor intaan la beeri loola dhaqmo xalka kaneecada, iyo sunta cayayaanka ayaa loo isticmaalaa in lagu nadiifiyo chernushki.
Ciidda loogu talagalay beeridda basasha waa in la diyaariyaa horay. First, mid ka mid ah waa in aan dayacin dayrta qoto dheer ee dhulka (ilaa 25 cm qoto dheer), taas oo ka caawisaa in si weyn u yareeyaan tirada nooc kasta oo cayayaanka (qabtay on dusha sare ee pupa u dhiman doonaan qabow), iyo labaad, sababtoo ah duuli basasha uma dulqaadan dhadhan cusbo, Cawska ciidda waa in lagu buufiyaa salineeska.
Saamaynta ciriiriga ah ee duqsiyada basasha ayaa lagu beeray karootada u dhaw, yaanyada iyo jecel.
Ma taqaanaa? Duulinta basasha ma istaagi karto urka dabacasaha, iyo duunkutajiga ma dulqaadan karo dhadhanka basasha. Beerta lagu beeray iyo karootada xaafadda, waxaad ka takhalusi kartaa laba cayayaanka isku mar.
Xeeladaha agrotechnic ee cayayaanka waa in la muujiyaa oo waafaqsan talooyinka ku saabsan wareegga dalagga. Basasha waa in aan sanad walba la beerin isla goobta, iyo soo celinta miraha beeraha oo keliya waxay noqon kartaa afar ilaa shan sano.
Waxa kale oo lagama maarmaan ah in laga fogaado qaabka sariiraha basasha ee meelaha ay toonta, saliida, iyo tulubyada ay sii korayaan. Kuwa ugu horreeya ee ugu fiican ee abuurka basasha waxay noqon doonaan yaanyada, kaabajka, qajaarka.
Si ay basasha u koraan oo u koraan ka hor inta ay duubaan basasha iyo dhigista ukunta, waa in hore loo beeray. Najiinka ciidda leh qoyaanka beerta nuska ah ee la qalajiyey ama peat, iyo sidoo kale cirbadaha, urta taas oo ka cabsata cayayaanka la tilmaamay ayaa gacan ka geysanaya ilaalinta dhirta laga bilaabo duqsashada basasha. Duufku ma dhicin ukumo carrada dabacsan.
Marka ugu horeysa ee lagu ogaado dhirta burburay waxaa laga saaraa ciidda waxaana lagu burburiyaa gubasho.
Daawooyinka dadweynaha ee duqsiga basasha
Haddii, si kastaba ha ahaatee, farsamooyinka agrotechnical ma caawin, iyo dirxiga duulaya basasha ayaa doortay sariirta basasha, waa inaad qaadataa tallaabooyin wax ku ool ah si aad u disho. Waxaa fiican in la bilaabo farsamooyinka tartiib tartiib ah, tusaale ahaan, lagu buufiyo daaweynta dadka. Hoos waxaad ka heli doontaa cuntooyin dhowr ah oo ka mid ah duqsiyada basasha, tijaabiyey on ay sirqo ay by bannaanka u badan.
Hab wax ku ool ah oo looga cabsiin karo duubista basasha iyo dirxiga ayaa ah in la shaqeeyo basasha. faleebo ee løvetann. Wixii diyaarinta, xididdada lafdhabarka (200 g) ayaa loo isticmaalaa, kuwaas oo lagu meeleeyo 10 litir oo biyo ah oo lagu faafiyo muddo toddoba cisho ah.
Waraabinta waxaa la sameeyaa labadii toddobaadba mar. Daaweynta ugu horeysa ee cayayaanka waa suurad wacan in la sameeyo guga, ka hor bixitaanka duulimaadka. Sidoo kale basasha waxaa lagu waraabiyaa infusions of dhirta kale cayayaanka: naasaha, cirbadaha geed, gocooni dixiriga ah, gumeysi.
Maareynta xalka boodhka tubaakada
Wixii diyaarinta xal udeedku wuxuu u baahan yahay 200 g boodhka tubaakada, 10 litir oo biyo ah iyo 30 g oo ah saabuunta dareeraha ah. Biyo iyo saabuun ayaa lagu daraa biyo cusub oo la karkariyey, oo ka tagaya xalka si loo yareeyo dhawr maalmood. Ka dib markaa waxaad bilaabi kartaa geedi socodka buufinta.
Boodhka tubaakada waxaa loo isticmaalaa in lagu rusheeyo sariiraha basasha. Isku dar ah boodhka tubaakada iyo boodhku wuxuu ku habboon yahay qaabkan.
Waxaan horey u soo qornay kor ku xusan xayndaabka ciidda ka hor intaan laga beerto saline. Cabbitaanka cusbada ayaa sidoo kale loo isticmaalaa marka cayayaanka laga helo sariiraha. Tani waxaa la sameeyaa saddex jeer xilli ciyaareed, iyadoo la isticmaalayo qoryaha buufinta.
Marka sprouts gaari dherer ahaan 5 cm, waxay la waraabinayaan xal loo diyaariyey 300 g oo ah milix caadi ah oo lagu kala diro 10 litir oo biyo ah. Waxaa muhiim ah in marka aad basaasta cusbo ku jirto, waxaad iska ilaalineysaa xalka helitaanka caleenta dhirta, laakiin haddii xalku wali baaluqo, markaas waa in lagu nadiifiyaa biyo nadiif ah.
Marka xigta, waraabinta waxaa lagu sameeyaa xalal fara badan. Marka, marka labaad (15-20 maalmood kadib marka hore), waxaad codsan kartaa xal 450 g halkii 10 l, saddexaad (20 cisho ka dib markii hore), 600 g oo milix ah ayaa isku milmay isla mugga biyaha. 3-4 saacadood ka dib, xalka carrada waa in lagu dhaqaa biyo nadiif ah.
Waa muhiim! Habkani wuxuu si weyn u caawin karaa yaraynta tirada cayayaanka, laakiin waxay sidoo kale dhaawici kartaa ciidda. - waxay u horseedaa saliideenta xad-dhaafka ah.
Isku dar ah iniin khardal ah iyo ash oo ka soo horjeeda cayayaanka
Natiijooyin wanaagsan ayaa muujinaya daaweynta leh isku dar ah ash iyo qalalan qallalan oo ah saamiga 3: 1. Waxay ku rusheeyeen sariiraha marka dixirku u dhaco ukumo-saarista. Si loo gaadho saameyn togan, daaweynta waa in la sameeyaa ugu yaraan laba jeer.
Waxaa jira cuntooyin dhowr ah oo dheeraad ah oo loogu talagalay samaynta ash kulul iyadoo lagu darayo basbaaska madow iyo boodhka tubaakada:
boodhka tubaakada - 1 tsp;
dhulka basbaaska madow - 1 tsp.
boodhka tubaakada (1 qaybood);
ash alwaax (qaybta 2).
Cuntada waa in la sameeyaa 3-4 jeer iyadoo la raacayo isbuuc gudihiis. Dhirta hore ayaa lagu buufin karaa biyo si ay ugu habboonaato isku dhafka.
Diidmada ciidda leh ash ashyaarka ayaa sidoo kale loo isticmaalaa. Marka lagu daro wakiilka cayayaanka, waxa kale oo uu noqon doonaa bacrimin geedka in uu ku quudiyo potassium iyo magnesium.
Waa muhiim! Siyaabaha dadweynaha waxay saameyn ku yeelan karaan oo kaliya maaha burburinta cayayaanka ilaa 100%. Si aad u bilowdo si aad u dalbato waa in la qaataa ka hor intaan la duulin, laakiin wadar ahaan laba waa in lagu shaqeeyaa laba ama saddex jeer xilli kasta.
Kiimikooyinka ka soo horjeeda duubka basasha
Isticmaalka kiimikada oo ka soo duulaya basasha ayaa ah tallaabo aan loo baahnayn, maaddaama basasha ay u muuqdaan inay soo uruuriyaan walxo waxyeelo leh, taas oo macnaheedu yahay in markaa kadib ay halis u tahay in la cuno.
Si fiican ayaa loo aasaasay sida quudinta foliar iyo macnaheedu yahay in loola dagaallamo duulimaadka basasha cusbo ammonium.
Sidoo kale, waxay inta badan waraabiyaan xalalka chloride mercury (1: 1500), nicotin sulfate (0.2-0.3%), iyo anabazine sulfate.
Waxaa jira tiro daawo cayayaan ah oo u oggolaanaya in ay ka takhalusaan duqsiyada basasha inta lagu jiro xilliga sii kordhaya ee dhirta, waxaa ka mid ah "Aktara", "Karate Zeon", "Tabazol", "Sochva", iwm. Si kastaba ha ahaatee, waxaa loo isticmaalaa kaliya haddii tirada cayayaanka waxay dhaaftay xuddunta 10% (sedex ama afar ukumood oo dhir ah).
Waxa kale oo jira talooyin ku saabsan daaweynta caleemaha basal "Immunocytophyte" (2 kiniin / 2 l oo biyo ah), "Intavir" (1/4 kiniin / 2 l oo biyo ah). Marka la buufinayo, wax lagu daro ayaa lagu daraa xalka: Tusaale ahaan, 1 tsp Sabuun saafi ah ama 3 dhibcood oo glycerin ah. Buufin soo noqnoqda ayaa la sameeyaa bil gudaheed, iyadoo la adeegsanayo Immunocytophyte.
Marxaladda nalalka beeraha waxaa sidoo kale laga sameeyaa "Medvetoks", "flyer", "Zemlin".
Waa muhiim! Marka kalluunta cayayaanka loo baahan yahay in laga reebo suurtogalnimada in lala xiriiro daroogada on baadad ee basasha.
Isticmaalka mid ka mid ah hababka lagu sharraxay ee la tacaalaya duufaan baska ah lagama yaabo inay si dhakhso ah iyo si wax ku ool ah uga caawiso cayayaanka beerta. Sidaa darteed, si loo gaaro natiijada la rabo waxaa la isticmaali karaa oo kali ah.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Bow 2020